Nolol maalmeedka goobta shaqada - InfoFinland
Nolosha Finland > Shaqo iyo ganacsi > Dhaqanka Finnishka > Nolol maalmeedka goobta shaqada
Wargelinta shaqada dhexdeeda ah
Inta dabdan dhacdooyinka soo socda iyo wixii is bedelo cusub ah waxaa lagu sheegaa shirarka shaqada. Haddii aad shirarka ka qayb gashid, waxaad saamayn ku yeelan karta aarimaha la xiriira shaqada, waxaad soo jeedin kartaa in is bedelo iyo horumarin lagu sameeyo goobtaada shaqada.
Sidoo kale goob shaqo kastaa waxay leedahay kanaalo wargalineed oo daakhili ah, horayna loogu heshiiyey, looxa ogeysiisyada, e-mailada ama qaanado boostada loogu rido shaqaalaha. La soco Wargelinta goobtaada shaqada.
Heshiiska shaqada waxaa inta badan ku qoran, goorma iyo intee le’eg oo biririf ayaa maalintii la qaadanayaa inta shaqada lagu jiro. Inta badan subixii waxaa la qaataa biririf kafee oo gaaban. Duhurkiina biririfka qadada iyo galabtii oo la qaato biririfta labaad ee kafeega. Dhirirka biririfta la qato waxay ku xiran tahay hadba goobta shaqada. Biririfaha dhirirkooda waa inaad horay u sii weydiisaa qofka madaxda kuu ah.
Meelaha shaqaaluhu ka cunteeyaan waxaa loo abaabulaa siyaabo kala duwan kuna hadba goobta shaqada: Goobaha shaqooyinka qaarkood waxay leeyihiin meelo laga cunteeyo oo shaqaalaha u gaara, qaarna shaqaalaha ayaa gurigooda ka soo qaata cuntada. Meelaha qaarkoodna shaqaalaha waxaa la siiyaa tigidho ay qiimo jaban wax uga cunaan meelaha laga cunteeyo ee u dhaw goobaha shaqada. Inta badan shaqo lama qabto waqtiga qadada.
Qabsashada hawlaha kuu gaarka ah inta laguda jiro waqtiga shaqada
Inta waqtiga shaqada lagu guda jiro lama qabsan karo wax adiga kuu gaar ah, ee waa´inaad qabsataa waqtiyada ka baxsan waqtiga shaqada. Heshiiska shaqada cadada saacadaha lagu heshiiyey maalintii in shaqo la qabto waa waajib in la dhawro mudan, sidaas darteed saacadihii lagu heshiiyey waa in la sameeyaa. Waa suurtagal in waqtiga nasashada la qabsado tusaale ahaan telefoonada muhiimka ah. Waxaad sidoo kale codsan kartaa fasaxa mushaar la’aan ah haddii ay xaaladdu dooneyso in waqti dheer laga maqnaado goobta shaqada.
Haddii sababo jira awgood aad tusaale ahaan dhakhtarka waqti kale oo ka baxsan waqtiyada shaqada ka weydo, kala hadal maqnaanshaha aaditaanka dhaktarka qofka madaxda kuu ah kalana heshii sidii aad dib uga gudi lahayd. Daryeelka caafimaadka shaqada waxaad tegi kartaa xilliga shaqada.
Waxbarasho la xiriirta shaqada
Inkastoo qofka shaqaalaha ahi markuu shaqada imaanayey uu lahaa xirfadii iyo waxbarashadii looga baahnaa shaqada, hadana shaqobixiyayaal farabadan waxay shaqaalaha ku dhiirageliyaan inay waxbarasho dheeraad ah qaataan. Inta badan waxaa tababarka la tagaa waqtiga shaqada, shaqo-bixiyuhuna lacag ayuu ka bixin karaa tababarka. Shaqobixiyaasha intooda badan aad ayey u qiimeeyaan in qofka shaqaalaha ah uu horumariyo xirfadiisa shaqo uuna barto waxyaabo cusub intii uusan bilaabin.
Sida caadiga ah goobaha shaqada la iskuma siiyo hadiyadaha. Laakiin waxaa jira maalmo muhiim ah (maalinta dhalashada, guurka, malinta hawlabag gelida) sida badan maalmahaas asxaabta shaqada iyo shaqo-bixiyuhu waxay qofka maalintaas u dabaadagay ku xasuustaan oo siiyaan hadiyad yar ama xirmo ubax ah.
Waqtiga shaqada iyo fasaxyada
Shaqo-maalmeedka caadiga ah waxey inta badan qaadataa siddeed saacadood. Shaqaaluhu wuxuu sidoo kale shaqo-bixiyaha kula heshiin karaa waqti shaqo oo nooc kale ah. Finland waxey ka tahay wax caadi ah in shaqaaluhu aysan shaqo dheeraad ah sameynin. Shaqada la qabto waa tan ku qoran heshiiska shaqada.
Dalka Finland xiliga fasaxyadu waxay bilowdaan bisha May bilowgeeda. Fasaxa uu qofka shaqaalaha ah helayo wuxuu ku xiran yahay hadba inta sano uu shaqaynayey iyo waqtiga heshiiska shaqadu uu bilowday. Fasaxa mushaariga ah ka sokow waxaad codsan kartaa fasax mushaar la’aan ah. Waqtiyada fasaxa ee Finland waa kuwo dheer marka loo barbardhigo wadamada kale.
Fiicnaanshada iyo waxyaabaha lagu raaxeysto goobta shaqada
Goobo badan oo shaqada waxaa shaqaalaha laga caawiyaa sidii ay shaqada u awoodi lahaayeen uguna raaxaysan lahaayeen goobta shaqada, sidaas darteed waxaa loo qabtaa maalmo gooni ah oo la siiyo nashaadaad kala duwan iyo haflado loo qabto. Shaqobixiyuhu wuxuu shaqaalihiisa siin karaa fursado la xiriira hiwaayadaha sida jimicsiga goobaha shaqada.
Ciidaha sanad walba jira
Finland waxaa ka jira maalmo cayiman oo fasax ah. Xafladaha ciiddu waa:
sannadka cusub 1.1.
gunaanadka ciida kirismaska (loppiainen) 6.1.
Ciida kirishtaanka ee maalintii nabi Ciise kor loo qaaday (pääsiäinen): waqtideedu wuu is bedbedelaa, wuxuuna u dhexeeyaa Maarso iyo Abril
maalinta shaqaalaha (vappupäivä) 1.5.
waa ciid kirishtaan ah, oo lagu xasuusto markii ay afartan maalmood ka soo wareegatay kor u qaadidii nabi Ciise (helatorstai): waana bisha May, laakiin taariikhda maalintaas way is bedeshaa had iyo jeer
ciida bartamaha samarka, maalinta calanka Finnishka, (juhannusaatto): bisha juun dhexdeeda, mar kasta maalin jimce ah
maalinta xoriyada 6.12
maalinta kirismaska 25.12
maalinta labaad ee ciida kirismaska, maalinta dadka dhintay la xasuusto (tapaninpäivä) 26.12
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan maalmahan ka sii aqri bogga Xafladaha ciidda ee Finnishka.
Goobaha shaqooyinka qaarkood sida isbitaalada waxaa laga shaqeeyaa maalmaha ciidaha. Waqtiyada ciidaha waxaa shaqaalaha laga siiyaa mushaar la dalacay. Ka hubi shuruudda heshiiska shaqadaada magdhawga.